IZIMVUKUZANE EZIVEZA OKUNINGANA NGEMPUMELELO EMSHADWENI - PAMPEREDPEOPLENY.COM - UKUFUNDWA KWEZINKANYEZI
Izimvukuzane Ezikhombisa Ukuthi Uzophumelela Ngemuva Kokushada
Ikhaya Ukufundwa kwezinkanyezi Ukubhula ngentende kwesandla I-Palmistry oi-Syeda Farah Noor Ngu I-Syeda Farah Noor ngo-Okthoba 31, 2018
Izimvukuzane ezingxenyeni ezihlukene zomzimba zichaza okuningi ngokuziphatha nangemvelo yomuntu ngamunye.
Lapha, kule ndatshana, siveza ngezindlela ezahlukahlukene umuntu angathola ngazo ukuthi inhlanhla yakhe izoshintsha kanjani ngemuva komshado wabo.
Owesifazane onama-moles ezingxenyeni ezithile kukholakala ukuthi uba nenhlanhla kuphela ngemuva komshado wabo.
Ngakho-ke, qhubeka uthole ukuthi ngabe uthando lwakho lwentokazi lunemvukuzane kunoma iyiphi yalezi zingxenye.
Imvukuzane Eceleni KoMakhala
Uma owesifazane enemvukuzane kulesi sikhundla, ngakho-ke akudingeki bakhathazeke ngokuthi impilo izohamba ngokungahambi kahle, ikakhulukazi lapho izinto zingahambi ngendlela yazo. Izithiyo zibonakala zingapheli ezimpilweni zabo ngaphandle kokuthi baze bashade. Lapho sebeshadile, bayojabulela impilo yobukhazikhazi futhi izofeza wonke amaphupho akho, kepha kuphela emva komshado. Kuze kube yilapho ubopha ifindo, kuzofanele usebenze kanzima ngokweqile ukwenza izinto zenziwe ngendlela yakho.
Imole Emhlathini Ongakwesokudla
Uma lona wesifazane enemvukuzane esihlathini sakhe sokunene, khona-ke kukhombisa ukuthi uzobhekana noshintsho olungazelelwe lwekusasa nenhlanhla ngemuva komshado. Abesifazane ababhekene nenkinga yezezimali bayelulekwa ukuba behlise umoya ngoba inhlanhla yabo izokhanya ngemuva komshado wabo.
Imole On The Unibrow
Uma owesifazane enemvukuzane phakathi nendawo zombili i-browser yakhe noma uma isesikhaleni esiphakathi kwamehlo, khona-ke kunamathuba okuthi baphumelele kakhulu ngemuva kokushada. Kodwa-ke, ngaphambi komshado, laba besifazane kukholakala ukuthi bakhula ngokwesilinganiso kuzo zonke izici.
Imole Emgqeni Womshado
Uma owesifazane enemvukuzane emnyama noma ebomvu emgqeni womshado noma eduze kwawo, khona-ke kunezibikezelo ezahlukahlukene ngakho. Imvukuzane ebomvu kuthiwa ikhombisa ubudlelwano obuyimpumelelo futhi obunezithelo phakathi kwabashadile, kanti ngakolunye uhlangothi, imvukuzane emnyama ikhombisa isimo esihluke ngokuphelele.
Uma owesifazane enemvukuzane kulesi sikhundla, khona-ke kukhombisa ukuthi impilo yabo imayelana nokuhamba. Kungaba izindawo zasekhaya noma zaphesheya, laba bantu babonakala behamba kakhulu. Iphinde ikhombe ngempilo ezwakalayo nenempumelelo ngemuva komshado. Kubikezelwa ukuthi iminyango yakho yempumelelo izovulwa kuphela emva kokuzinza.
ngiyabonga izithombe ngezifiso zokugubha usuku lwakho
Izinyanga ezi-2 isisu esikhulelwe sizwakala
ungasithola kanjani isikhumba esifanele ezinsukwini eziyi-14
ongakudla ngesikhathi sokucasuka esiswini
rose amanzi kanye nejusi likalamula izinzuzo